Hambisa udliwanondlebe kunye neengcebiso zilandelayo kwi-resume yakho | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Hambisa udliwanondlebe kunye neengcebiso zilandelayo kwi-resume yakho
Ukuba Izidalwa ezikwi-Intanethi Sithethile ngeendlela ezininzi zokuqalisa kwakhona, sinike amakhonkco okukhuphela kwakhona kwaye ubonise uyilo. Ngoku masithethe ngenene malunga nezinto onomdla kuzo. Kuba uyilo oluhle aluyiyo yonke into, ikwalulwazi. Amaxesha amaninzi thina ngokwethu sijonga uyilo olugqwesileyo olungenakunceda kwimisebenzi ethile. Kunye nokulandela tips hook up udliwanondlebe kwinkampani oyifunayo.
Amaxesha amaninzi inemizobo okanye inemibala emihle ayisebenzi. Nokuba yimibala ethile nokuba. Kuxhomekeke ekubeni uza kukhetha amayeza, umthetho, umantyi, isazinzulu sekhompyuter okanye umyili. Ngamnye unesicwangciso esithile ngokubhekisele kuyilo. Kodwa ngenxa yoku, sibonise amanqaku amaninzi aneemodeli ezahlukeneyo.
Namhlanje siza kufundisa ukuba loluphi uhlobo lomxholo 'olubalulekileyo' kuxhomekeke kubuchwephesha oza kuwenza. Ngamanye amaxesha izixhobo ziya kuba luncedo kwaye ngamanye amaxesha azininzi kangako.
1 Iprosesa yelizwi: Igama phakathi kwabanye
2 Cinga ukusebenzisa umbala
4 Musa ukulala kwi-resume
5 Ukuqhubeka kwakhona kubonisa ubuntu bakho
6 Jonga upelo lwakho
Iprosesa yelizwi: Igama phakathi kwabanye
Akucetyiswa ngenxa yokusikelwa umda kwiMicrosoft Word ingakunika xa uyila. Kodwa mhlawumbi ukuba uyisebenzisela unobhala okanye ulawulo ukuba oko kunyanzelekile. Kuba udliwanondlebe akazukujonga imibala. Endaweni yezihloko kunye namava. Kule nto ufuna into elula kwaye eninzi.
Ukuba kwelinye icala uza kuyila, iLizwi kubalulekile ukuba ulibale. I-Illustrator, i-Photoshop, i-Indesign iyasebenza xa usenza. Oku kuyakunika ubomi obungakumbi xa ufuna ukufumana into ethe ngqo yomsebenzi wakho.
Cinga ukusebenzisa umbala
Nangona siqhele ukusebenzisa abamnyama nabamhlophe xa siprinta, Iya isiba yinto eqhelekileyo ukuthumela ii-imeyile kwaye uqoqosho lwakho aluyi kuchaphazeleka ngombala. Ke ukuqala kwakhona okumnyama nokumhlophe kuya kuba lilize. Ukuba umsebenzi wakho awuyileli, awuzukukhathalela uyilo oluntsonkothileyo. Kodwa ukuba ithoni yombala engakhange ibonakale iyathandabuza, kodwa inobukrelekrele. Ngokuchasene noko, ukuba uyila, sebenzisa indibaniselwano yombala elungileyo. Ukuthatha ingqalelo ukuba ukhetha yiphi.
Ngaphandle kwemisebenzi enzima yomsebenzi. Njengoko inokuba ngamayeza okanye amaphepha ophando aya kuthi acele ikharityhulamu enamaphepha angamashumi amahlanu, ezinye azidingi kangako. Ukuba uza kucela naluphi na uhlobo lomsebenzi kwaye ngakumbi ukuba uyilo, iphepha elinye lanele. Kuyo uya kunika iinkcukacha ngeendaba zamva nje nezona zibalulekileyo kwezemfundo nakwengqesho. Ukuba uza kuyila, uyilo olunomtsalane kunye nesicatshulwa esincinci uya kufumana ifuthe elingaphezulu.
Ukuba akukhange kubenjalo, zama ukumisela eyona mpumelelo ilapha ngasentla, nangona ulandelelwano lwempumelelo lwahlukile. Kuya kufuneka utsalele ingqalelo kwinto onayo, hayi kwinto ongenayo. Ungaziva ngathi ufihla imaski kwaye uxela iinyaniso ezinesiqingatha kwi-resume yakho. Icacile kwaye imfutshane.
Musa ukulala kwi-resume
Yinto esiyibone kumabonwakude ngethoni ehlekisayo. Ukubaxa iziqinisekiso zethu okanye amava omsebenzi kuqhelekile. Kunye neelwimi. Ukubeka "isiNgesi: Phakathi" sele isetyenziswa ngokubanzi. Umntu ojonga kwakhona ukuqhubeka kwakho uya kulahla amawaka abo.
Kwi-resume yakho kuya kufuneka ubandakanye ubuncinci: Iinkcukacha zakho kunye nonxibelelwano. Ukuba ufuna ukubizwa, yenza lula unxibelelwano lwakho. Kananjalo, ukuba uyila, kubaluleke kakhulu ukuba bawubone umsebenzi wakho wenziwe, ayisiyiyo kuphela ukuba bayayidibanisa nokuqhubeka kwakho. Ikhonkco lakho lenethiwekhi kunye nomsebenzi wakho bobabini inkampani kunye wezifanekiso zibalulekile ukuze zibonwe.
Ukuqhubeka kwakhona kubonisa ubuntu bakho
Elula akufuneki ukuba lithethe ukuba liyadika. Ukuqhubeka kwakhona kukubonisa isimo sakho kunye nobuntu, kwaye ummkeli uya kuskena, uyazi okanye cha, kwizinto ezihlukanisa ukuqhubeka kwakho ukusuka kumakhulu abanye abafanele bahambe. Yenza i-resume yakho ibonakale uyilo olutsala umdla kunye nezinto ozichukumisayo… musa ukuyibaxa.
Jonga upelo lwakho
Ngamanye amaxesha sibaleka nzima ukwenza i-resume kuba asikulungiselelanga. Endaweni yokuba siyenze xa sinayo 'snitch'ithuba lomsebenzi. Ke kufuneka sikwenze ukubaleka ukuze sibe ngabokuqala ukufika. Kodwa nokuba ezo zizathu, umfanekiso owunika wona awukho sesikweni kwaye awucacanga. Into esingayiyo kwaye asifuni ukuyithetha ngathi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Hambisa udliwanondlebe kunye neengcebiso zilandelayo kwi-resume yakho
UKelah ching sitsho
Amanzi ngobuqhetseba bukaPedro Dominguez, umnini weArhente yamanga enelogo ebiweyo yeSan Cristobal de las Casas eqhotyoshelwe ifoto QAPHELA
Cela iidipozithi, uyakuthengisa iphakheji
Akaze akuqinisekise ukuba ushiya emva koko uthi ubuyise imali yakho ngeedipozithi ezingezizo kuba nkqu nolwazi lwakho luyakucela kwaye lubuyisele kuFalsify ulwazi ukuba uyamazi kwaye ukukhohlisile, mxele, siqokelela onke amaxhoba alolu Gwenxa ukhenketho
Phendula uKelah Ching
Intengiso yoyilo lweDurex